LOVE ISLAND 2018: ကျွန်းသူကျွန်းသားဟောင်းများက INSTAGRAM ပေါ်တွင်ဘယ်လောက်ကျသနည်း။ - သတင်း
Love Island သည်နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဗြိတိသျှပြည်သူတို့၏ ဦး နှောက်၊ နှလုံးသားနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် villa မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်စာချုပ်များသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိလာသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဂျိမ်း arthur က x အချက်အနိုင်ရကိုပြု၏
အမှန်တကယ်တီဗွီအစီအစဉ်မှထွက်ခွာပြီးနောက်ကျွန်းသူကျွန်းသားများ feeds တွင် Instagram ကကမကထပြုထားသောပို့စ်များနှင့်မိတ်ဖက်များပေါ်ထွက်လာသည်နှင့်အမျှပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်နှင်ထုတ်ခြင်းတို့သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေပုံရသည်။
ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ထိတ်လန့်စရာလျှို့ဝှက်ချက်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်းသူကျွန်းသားဟောင်းများ၏လျှို့ဝှက်မြှင့်တင်ရေးဘ ၀ ထဲကိုဝင်ရောက်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်းကျွန်းပေါ်မှထွက်ခွာသွားသည့် အချိန်မှစ၍ အနည်းဆုံး Instagram နောက်လိုက်များရရှိခဲ့သည့် Love Islander ကိုတောင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည်။
ကျွန်းသားများအနေဖြင့်သူတို့၏ LinkedIns များကိုလှည့်စားခြင်းဖြင့်အမှန်တကယ်ဘာလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်းကျွန်းမှ Love Island villa မှထွက်ခွာသွားသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်းသားတစ် ဦး ချင်းစီမှမည်မျှရရှိခဲ့သည်ကိုအသစ်ပြန်လည်ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်းသူကျွန်းသားဟောင်းများ၏ Instagram URL များကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက် ။ သင်၌နောက်လိုက်မည်မျှရှိမည်ကို အခြေခံ၍ သင်တစ် ဦး လျှင်ငွေမည်မျှရမည်ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုပါ၊ ဟုတ်တယ်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် Instagram မှမည်မျှငွေရနိုင်မည်ကိုသင်တွက်ဆနိုင်သည်။ ရပါတယ်။
Kendall Rae- Knight ဟာ
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 3.2K
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 41.6K
အင်္ဂလန်ကစားခြင်းကိုကြည့်နေစဉ် @WilliamHill Arms တွင်လန်ဒန်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်း ??????? ⚽️ #ThisIsMore #itscominghome
မျှဝေသည် Kendall Rae Knight ဟာ 5:49 pm တွင် PDT မှာဇွန် 24, 2018 ရက်တွင် (@kendallraeknight)
အို, မဲပေးခံရဖို့ပထမ ဦး ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ဆင်းရဲသား Kendall ။ 749K နောက်လိုက်များ Insta တွင်ရှိပြီးသူမသည်ပုံမှန်ဝတ်စုံပုံများနှင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြုံးသည့်ပုံမှန်ပိုစတာဖြစ်သည်။ သူမသည်အချိန်ပြည့်မော်ဒယ်လ်ဖြစ်ပြီးဝီလျံဟေးလ်၊ Missguided နှင့် Park Plaza Hotels တို့နှင့်လက်တွဲခဲ့သည်။
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 2.9K
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 0
@itv နွေရာသီပါတီမှာငါဘယ်သူဝင်လာတာလဲကြည့်ပါ ဦး ။ #ccoupling #muggledoff
မျှဝေသည် Niall Aslam 6:29 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 21, 2018 ရက်တွင် (@niallaslam)
ပထမအပတ်များအတွင်းအငြင်းပွားဖွယ်ထွက်ခွာသွားမှုနှင့်အတူ Niall သည် Instagram တွင်မည်သည့်ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုမှမရရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်ဟယ်ရီပေါ်တာဟတ်စတာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမွေးဖွားရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 1.9K
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 11.4K
မိန်းကလေးများငါ @ iconic.london Prep Set Glow Mist နှင့်အတူစွဲလမ်းနေပါသည်။ ငါ့နွေရာသီအတွက်ငါ့မိတ်ကပ်အိတ်ထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိရမယ်။ သင်ကြိုးစားရပါမယ်
မျှဝေသည် Hayley Hughes 10:04 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 21, 2018 ရက်နေ့တွင် (hayleyhughes.xx @)
သူမ၏ 2019 ပြက္ခဒိန်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်သည်။ Hayley သည် Iconic London, Nutribuddy UK နှင့် William Hill တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး Kendall ကဲ့သို့သောအသင်းများနှင့်ကစားခဲ့သည်။ သူမ၏နောက်လိုက်များသည် ၄၄၄ K အထိသာတက်နိုင်ပြီးအစောပိုင်းထွက်ခွာသွားမှုအနိမ့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 1.2K
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 1.2K
နောက်ကျောဂိမ်းထဲမှာမကြာမီ ?? ဆက်သွယ်ရန်[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မျှဝေသည် ချာလီဖရက်ဒရစ် 4:25 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 18, 2018 ရက်တွင် (@charliefrederick_)
Charlie သည် Nev Models ၏ရှေ့စာမျက်နှာတွင်ပါ ၀ င်ပြီးမော်ဒယ်လ်အလုပ်မှန်မှန်ရရှိသည်။ သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက်၏ပထမငါးမိနစ်အတွင်း Instagram ၌နောက်လိုက် ၁၀၀K ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် villa မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မော်ဒယ်လ်အလုပ်များအတွက်သူ၏အမြင့်ဆုံးသောကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လည်ရရှိရန်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 2.8K
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 30.8K
... ငါ @beauty_worksonline extension များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် SO အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ် !! ငါအမှတ်တံဆိပ် '' အသစ်က '24 အရှည်အတွက်အရိပ်' ဒူဘိုင်း '&' Raven 'တွင် Micro Ring ကို Stick သိကောင်းစရာ extension ကိုဝတ်ထားတာပါ။ site တစ်ခုလုံးမှငွေအတွက်ကုဒ် ROSIE10 ကိုသုံးပါ
မျှဝေသည် Rosie Anna Williams 10:22 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 11, 2018 ရက်တွင် (@rosieawilliams)
Iconic London နှင့် NutriBuddy UK သံအမတ်ကြီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမသည်ဆံပင်ဖြည့်တင်းမှုကိုထောက်ခံကာသူမ၏ glam အသင်းမှသူမ၏ glam ဖန်တီးမှုများစွာကိုတင်ခဲ့သည်။ သူမရဲ့ bikini ဓာတ်ပုံတွေဟာပျမ်းမျှ ၁.К ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲရပါတယ်။
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 3.4K
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 10.2K
Tbh ငါထင်တာငါ့မျက်နှာက tbh !! ချောကလက်သည်နှလုံး၌ခိုင်မာသည့်နေရာရှိသည်❣️ Dairy Milk Whole Nut သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးချောကလက်အရက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင် Love Island မှထုတ်လုပ်သော Cadbury Inventor ဘားသို့ဝင်ခဲ့သည်။ စူပါမားကတ်စင်များပေါ်တွင်သင်၏ဘားရှိခြင်းအခွင့်အလမ်းရရှိရန်လည်းပါ ၀ င်ပါ။ #dairymilk #ad #dairymilkwholenut @cadburyuk
မျှဝေသည် အီး Y ကိုတစ် ဦး က L ကို B ကိုအိုအို K သည်အီး R ကို 1:07 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 17, 2018 ရက်တွင် (@eyalbooker)
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးငွေရှာသူသည် Eyal သည် Dogs Trust၊ Cadbury's UK၊ Missguided Man၊ NHS Voices နှင့်အတူ guest ည့်သည်နှင့်မကြာသေးမီက Do Bits Society သို့ Piers Morgan (?) နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 23.2K
ငါနေရောင်ခြည်ပျောက်နေတယ် ?? ဒါပေမယ့်ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်းဗိုလ်လုပွဲများအတွက်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်! P.s. ဒီတနင်္ဂနွေ @ jet2pics ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးလက်မှတ်နှင့် Jet2holiday ကို Majorca သို့အိတ်ချရန်သင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့်! အသေးစိတ်ကို @loveisland # Jet2holidays #loveisland အတွက် Jet2holidays ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သာသွားလိုက်ပါ
မျှဝေသည် Zara McDermott (@zara_mcdermott) ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင်ည ၁၁း၅၉ နာရီတွင် PDT ၌ပြုလုပ်သည်
Zara သည် Superdrug Health, Jet2Holidays, Missguided နှင့် In The Style နှင့်အတူယခုအချိန်အထိလူနေမှုပုံစံစတဲ့အများဆုံးမိတ်ဖက်များအဖြစ်အာမခံထားသည်။ သူသည်အာဒံနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်ဗီလာမှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ကြာရှည်ခဲ့ပြီးသူတို့သည်အပြင်ဘက်တွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးသူများဖြစ်နိုင်သည်။
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 3.9K
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 3.9K
အချစ်ကျွန်းဗိုလ်လုပွဲအတွက်တကယ်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဒီတနင်္ဂနွေ @ jet2pics ယှဉ်ပြိုင်မှုအားဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးလက်မှတ်များနှင့် Jet2holiday ကို Majorca သို့သွားရန်သင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့်! အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို @loveisland # Jet2holidays #loveisland အတွက် https://loveisland.jet2holidays.com/enter အတွက် Jet2holidays ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သာသွားလိုက်ပါ။
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 12:16 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 22, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)
သူ၏ Neon ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်ယခုမှနို ၀ င်ဘာအထိသူ၏ထင်ရှားကျော်ကြားမှုစာရင်းကိုနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသည်။ သို့သော်သူ၏ကုမ္ပဏီ Sculpt Fitness သည်သူ၏ Instagram ချိတ်ဆက်မှုအများစုကိုရယူပြီးသူမည်မျှတိုသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ Zara ဟာကံကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။
အဲလက်စ် Miller က
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 637,46
ပိုဆိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ... #celeb #lookalikes #loveisland #mrselfridge #dannydyer #dejavu #hunks #lads #specs
မျှဝေသည် အဲလက်စ် Miller က 12:19 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 29, 2018 ရက်တွင် (mralexmiller1990 @)
၂၀၁၇ ခုနှစ်မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောဝတ်ဆင်သူကို (Specsavers ၏အဆိုအရ) သူသည်အသက်ငယ်သောဒန်နီဒိုင်ယာအစားဂျယ်ရမီပီဗင်doppelgängerဟုဝါကြွားခြင်း မှလွဲ၍ ထိုသက်တမ်းလွန်ကာလအတွက်အမှန်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ရာနှုန်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်၊
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 1.7K
အကြိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်းရူးရေနံတူးစင်? @ gym.66_ ဖြစ်သောမက္ကာကိုလွဲချော်ခြင်းဖြင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုသို့ပြန်လည်တက်ရောက်ရန်လူတိုင်းကိုစောင့်ဆိုင်း။ မရပါ။ ️‍♀️? ‍♂️ #lessdrinksmoresquats
မျှဝေသည် Frankie Foster 5:28 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 21, 2018 ရက်တွင် (frankiefoster3 @)
Samira villa ကိုစွန့်ခွာပြီးကတည်းကသူဟာ Frankie ကိုအငြင်းပွားစရာအတော်များများမှာတွေ့ခဲ့ရပေမယ့်သူထွက်ခွာသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောနေတာတွေအားလုံးကိုတော့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူမ၏အဝတ်အစားများ၊ အပြုံးများ၊ Gatwick တွင်သူတို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသည့်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည့်ဗီဒီယိုနှင့်မကြာသေးမီကသူတို့၏ selfies များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ထိုအခန်း၌အခြားသူကားအဘယ်သူနည်း။
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 321 ။ ၈၂
ယခုအချိန်အထိခန့်မှန်းရန် £ 321,82
R ကိုငါ T က ဦး တစ် ဦး က L ကို ?? - ငါ့မိုးကိုဒီမိုးမရွာစေရဘူး
မျှဝေသည် ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Wardle 5:04 pm တွင် PDT မှာမတ်လ 31, 2018 ရက်တွင် (grace.wx @)
Angus Thong နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော snogging အတွက်သရုပ်ဆောင်များကို
Yikes ... သူမ၏ဝင်ငွေ, အကြိုက်များနှင့်နောက်လိုက်မှာလုံးဝဘာမျှမတူညီ။ ဂရေ့စ်သည်သူမ၏အလှပြင်ဆိုင်ကို Crystal နန်းတော်နှင့် Casa Amor ရှိ Love Island တွင်ခဏတာနေထိုင်ခြင်းသည်ဇိမ်ခံဘဝပုံစံကိုမျှဝေသည်။ သူမသည်တစ် ဦး လျှင်ပေါင် ၃၂၀ သာထုတ်လုပ်သည်။ သူသည်ထွက်ခွာသွားသူအားလုံး၏အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။
မျှဝေသည် Samira တန်ခိုးကြီးသော 12:19 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 25, 2018 ရက်တွင် (@samiramighty)
Frankie နောက်မှ Samira ၏ထွက်ခွာသွားမှုကသူတို့စုံတွဲအတွက်နောက်လိုက်များထွက်လာသည်ကိုဆိုလိုသည်။ Insta ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမုန်းတရားလုံးဝမရှိခြင်းတို့ကြောင့်သူမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ ၀ မ်းသာကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ Samira မင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူး။
စာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 2.6K
မျှဝေသည် Ellie Brown 12:55 pm တွင် PDT မှာမေလ 7, 2018 ရက်တွင် (brown.elle @ @)
Villa မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက် Ellie ထံမှ smooches၊ အများပြည်သူအသွင်အပြင်များနှင့်လုယူရိုက်ကူးမှုများစွာသည်သူမ၏အကြိုက်များနှင့်ငွေများကိုသေချာပေါက်ရရှိခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ Adam ကဲ့သို့စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်ကိုယ်စားပြုသော Neon သည်သူမအားအလုပ်များနေစေပြီးသူမအားသူမအား dolla ပိုဖြစ်စေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
တစ်ပို့စ်အတွက်ငွေ: ကပင်အရေးပါသလား? ဒါပေမယ့် £ 1.9K
မီးခိုးရှိတယ်ဘယ်မှာမီးရှိတယ် ?? #loveisland
မျှဝေသည် ချာလီဘရိတ် 2:05 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 12, 2018 ရက်တွင် (@ charliebrake1)
ကြွယ်ဝသောကောင်လေးနှင့် Ellie ၏အခြားတစ်ဝက်သည်အပိုဆုငွေများတကယ်လိုအပ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းသူ၏ရှုပ်ထွေးသောကောင်လေး persona သည်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပုံရသည်။ ၎င်းသည်သူ၏မေးရိုးလိုင်းသို့မဟုတ်အပြာရောင်မျက်လုံးကိုဖောက်။ လူများကိုနှစ်ကြိမ်ထိပုတ်စေသည်။
ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 1.8K
မျှဝေသည် Sam Bird 10:05 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 20, 2018 ရက်တွင် (@samrobertbird)
ဆမ်နှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့သည်ကျွန်းအားအတူတကွလက်တွဲပြီးစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အတွက်လက်တွဲဖော်များမိတ်ဖက်ပြုမည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေသည့်အတွက်ကံကောင်းသောဘောင်းဘီများကိုဆက်လက်ပေးလှူသည်။
ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ငွေ £ 5.2K
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ beaut အဖွဲ့အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်များကိုသစ္စာစောင့်သိပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏သော့ခလောက်များကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက် @hannahomua မိတ်ကပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လက်သည်းများ @touchwoodbeauty နှင့် @hairbyjackluckhurst အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီဟာကငါမနက်လား။
မျှဝေသည် ဂျော်ဂျီယာသံမဏိ 1:17 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 22, 2018 ရက်တွင် (@geesteelx)
DJ Khaled ၏ပညာရှိသောစကားများအရ၊ villa သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးတစ်လအကြာတွင်သူမနောက်လိုက်သန်း ၁၀၀ ထိရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးသူမ၏ပရိသတ်များအပေါ်ထားရှိသောသူ၏သစ္စာစောင့်သိမှုသည်အကန့်အသတ်မရှိ။ သူမ၏သူငယ်ချင်းများမှလိမ်လည်မှုများနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောမက်ဆေ့ခ်ျများသည်ယခုအချိန်အထိကျွန်းသူကျွန်းသားအားလုံး၏နှစ်ဆသောအရာနှင့်ငွေအများဆုံးရရှိခဲ့သည်။
၁ Love Island ပိတ်ဆို့ခြင်း။ ။ ပြိုင်ပွဲ ၀ င်များသည် ၀ ီလာမဝင်မီခရီးသွားခြင်းဖြစ်သည်
နှစ် ) ဖရန့်ခ်သည်လိမ်ပြောသောကောလာဟလများကိုသာကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီးသူ၏ဇာတ်လမ်းသည်ပင်အဓိပ္ပာယ်မရှိလှ
၃ ) ပြပွဲသက်သေပြကြောင်းတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားမှမတ်ေတာကျွန်းသားများ '' လင့်ခ်အားလုံးသည် fixed ဖြစ်ပါတယ်